သမိုင်း သုတေသီ ရမ္မာဝတီ အသျှင်ပညာစာရကိစ္စက မပြီးပြတ်သီး။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရခိုင်တိကတော့ခါ အင်အားတေိစုပြီး တွန်းလှန် နိန်ကတ်ဆဲဖြစ်တေ။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရကေ ခုခံ ကာကွယ်နိန်ကတ်ဆဲဖြစ်တေ။ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းတိ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတိ စသည်ဖြင့်၊ တဖက်ကလည်း လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုရေအလုပ်ကို လုပ်နိန်ကတ်ဆဲ။ ဘဇောင်ပိုင်ချောင်ဖြစ်ဖြစ် ပုံစံမျိုးစုံ အသွင်မျိုးစုံနန့် အလွှာပေါင်းစုံက ရခိုင်တိအနီနန့် ခုခံကာကွယ်ရေး အလုပ်တိကို သမိုင်း တာဝန်တရပ်အနီနန့် လုပ်ကတ်ရလိမ့်မေလို့ ယုံကြည်ပါရေ။ အမျိုးထိကေ မချိအောင် နာတတ်တေ ရခိုင်တိအတွက် စိန်ခေါ်မှု တရပ်လည်း ဖြစ်နိန်ပြန်ပါရေ။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 4:26 AM0comments
. . . အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ သာလျှင် အထူး ပေါက်မြောက် ချီးမွမ်းလောက်သော ပဂ္ဂိုလ် မဟုတ်သီး။ မြန်မာဘာသာ - ပေါရာဏနှင့် ဝေါဟာရ စာဟောင်း စာမျဉ်း ရို့ကိုလည်း။ အထူးလိုလား လိုက်စားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တေ အားလျော်စွာ။ ယခု နာမည် ထင်ရှားလျက် ဟိသော ပရိုဖက်ဆာ ဆရာလွန်း ထံ၌ တပည့် ခံခဖူး၍။ ရှိဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲ စာအုပ် တအုပ်ကို ကိုယ်တိုင် တည်းဖြတ်၍ပင် ရိုက်နှိပ် ဖြန့်ချိ ခဖူးလီသည်။ ဤကဲ့သို့ စွယ်စုံပညာဂုဏ် အရည်အချင်းဖြင့် ပြည့်စုံသဖြင့်။ မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားရို့ ရနိုင်သော ရာထူးများ အနက်။ အကြီးဆုံး ဖြစ်သော ပြည်ထဲရေး အမတ်ကြီး ရာထူးဖြင့်။ အစိုးရရို့၏ ချီးကျူး ခန့်အပ်ခြင်းကို ခံခရသည် ဖြစ်ရာ။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ ထင်ရှား ဟိနီခြင်းသည်။ မြန်မာပြည်ကြီး၏ ကျက်သရေပင် ဖြစ်ရကာ။ ယခုကဲ့သို့။ သက်တန်း မစေ့မှီ။ ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ရခြင်းအတွက်။ သာ၍ပင် ဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ချေသည်။ . . . ” . . . [၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ Unity စာပီက ပထမ အကြိမ် အဖြစ် ထုတ်ဝီ ဖြန့်ချိခရေ မောင်ဇေယျာ၏ 'ကမ္ဘာသိ မြန်မာများနှင့် ကမ္ဘာသိ မြန်မာ စာအုပ်များ' က "စွယ်စုံပညာသျှင် ဦးမေအောင်" အကြောင်းကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြစွာ ဖြစ်ပါရေ။]
ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် စွယ်စုံ ထူးချွန်သော ပညာသျှင် တဦး မှာ ဦးမေအောင် (၁၈၈ဝ - ၁၉၂၆) ဖြစ်သည်။ ဦးမေအောင်သည် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားရေး၊ ပညာရေးနှင့် စာပီ ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ရှိတန်းမှ ဦးဆောင်ဦးရွက် ပါဝင်ခသူ တဦး ဖြစ်သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 10:11 AM0comments
အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို စတင်မျိုးစေ့ချခသည့် ဦးရွှေဇံအောင်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ၁၈၇၁-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နိန့်၌ မွီးဖွားခ၏။ အဖ ခရိုင်ရဲဝန် ဦးရွှေသာ၊ အမိ ဒေါ်အဖြူစံရို့၏ သားသမီး လေးယောက်အနက် သားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၈၈၁-ခုနှစ်မှစ၍၊ စစ်တွေမြို. အစိုးရ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားရာ ၁၈၈၅-ခုနှစ်၌ အလယ်တန်းစကောလာချိ ဆုကိုရဟိသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ. ပညာသင်ကြားပြန်ရာ ၁၈၈၇-ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမိန်းပွဲကို အောင်မြင်သည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ယူပြန်ရာ ၁၈၉၁-ခုနှစ်တွင် ထိုခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ဖြစ်သော ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ထူးကို ဆွတ်ခူးရဟိသည်။ လိုအပ်သောပညာ ရဟိပြီးနောက် ပညာရေးဌာန၌ ပညာအုပ်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက် ထမ်းဆောင်သည်။ ထိုနောက် မြီစာရင်းဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ အတန်ကြာ အမှုထမ်းခရာ ၁၉၀၂-ခုနှစ်တွင် မြို့အုပ်တန်းခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ လက်အောက်ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း ခံရပြန်သည်။ ၁၉၀၇-ခုနှစ်တွင် ၀န်ထောက်တန်းခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့သို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း ခံရပြန်သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 11:04 AM0comments
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရကို ဇာလူတိက ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့လဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အကြီးမားဆုံး ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီတစ်ခုဖြစ်တေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက ယခုအခါ လွှတ်တော် အသီးသီးမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြဖို့ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အမည်စာရင်းတိကို ရွီးကောက်ပွဲ ကော်မယှိန်မှာ တင်သွင်းခပြီးဖြစ်ပါရေ။ အခုပိုင် တင်သွင်းခပြီးရေ နောက်ပိုင်းမှာ ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို နိရဉ္စရာက အိန်တာဗျူး ပြုလုပ်ခွင့် ရခပါရေ။ အိန်တာဗျူး အပြည့် အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါရေ။
မိန်း။ ။ ဥက္ကဌရို့ ပါတီ အနီနန့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဇာနှစ်ဦး စာရင်း တင်သွင်း နိုင်ခပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ရို့က ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အားလုံးပေါင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၆၃ နီရာမှာ ၄၃ နီရာ ကျွန်တော်ရို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တင်သွင်းနိုင်ခပါရေ။ နီရာပေါင်း ၁၈ နိန်ရာလောက်က လစ်ဟင်းမှု ဟိလားခပါရေ။ ဗမာပြည်ထဲမှာတောခါ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ တစ်နီရာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ တစ်နီရာ ကျွန်တော်ရို့ တင်သွင်းနိုင်ခပါရေ။ ကျွန်တော်ရို့ စုစုပေါင်း ၄၅ ဦးကို တင်သွင်း နိုင်ပါရေ။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 10:17 AM 1 comments
ဒေါက်တာအေးကျော်ကို ၁၉၃၉ ခုနှစ် က ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် တန်းလွဲချောင်း ရွာမ ရွာသစ်တွင် မွီးဖွားခသည်။
ဒေါက်တာအေးကျော် ဆည်းပူး ရဟိခသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့များမှာ B.A (History and Religion) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (၁၉၅၉) ၊ B.A (Honors) Oriental History ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (၁၉၆၀) ၊ M.A (History of Asia) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (၁၉၆၄) ၊ B.L (Law) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (၁၉၆၆) ၊ PhD (History of Southeast Asia) Monash University. Australia. 1979 စသည် ရို့ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာအေးကျော်သည် ယခုအခါ အမေရိကန်တွင် နိန်ထိုင်သည်။ ဆရာကြီင်္း ဒေါက်တာ အေးကျော်မှာ ရခိုင်တမျိုးသားလုံးက လေးစားရိုသေသော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ဖြစ်သည်သာမက လက်ဟိ မြန်မာနိုင်ငံရေး ရခိုင်နိုင်ငံရေး အပေါ် မျက်ခြီ မပြတ် လေ့လာ သုံးသပ် ကျွမ်းဝင်နိန်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင် အမျိုးသား ပညာတတ်များ ကြံ့ဖွတ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရွီးကောက်ပွဲဝင်ရန် စီစဉ်နိန်မှုအပါအ၀င် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရခိုင်အမျိုးသားများ အနာဂတ် အခြေအနီများကို ဆရာကြီးကို မိန်းမြန်းရာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြေဆိုထားပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 4:48 AM0comments
၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂတ်စ်လ ၁ ရက်နိန့်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဦးခိုင်ပြည်စိုးနှင့် သူတပည့် ဖြစ်သူ နှစ်ဦးအား ရဲ SP နှင့် စရဖမှ (စစ်တွေ)အမှတ် ၁ ရဲစခန်းကို ခေါ်ယူပြီး စစ်ဆေးမိန်းမြန်းမူများ ပြုလုပ်ခသည်။ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမိန်းမြန်းမူနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိရဉ္စရာကမိန်းမြန်းရာ ဦးခိုင်ပြည်စိုးမှ အဂုပိုင် စတင် ပြောကြားသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 11:37 PM0comments
တနိ အကျွန့်သူငယ်ချင်းနှင့် အကျွန်သည် ဘောင်းဒွတ်သားစု ရွာလယ်ခွဆုံအနားဟိ စင်တွင်ထိုင်နီကတ်ပါသည်။ ယင်းစဉ် အသက် ၇၀ ပတ်ဝန်းကျင်၌ဟိမည့် ဝါကြီးတယောက်သည် လမ်းမှလားယင်း စင်ရှိသို့ရောက်သောအခါ တန့်လိုက်ပြီး တခုခုမီးလိုဟန်နှင့် အကျွန်ရို့ကိုကြည့်နီပါသည်။ ဝါကြီးအမူအရာကို အရိပ်ကျသော အကျွန့်သူငယ်ချင်းက အကျွန့်လက်ဦးစွာပင်။
“ဇာမီးချင်ပါလေ့ အဘိုး”ဟုမီးလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါဝါကြီးလည်း အကျွန်ရို့အနားသို့ကပ်လာကာ။
“ပွဲစား စောသာကျော်အိမ်ဇာနားမှာလဲဝေ”ဟုမီးပါသည်။ ပွဲစားစောသာကျော်မာ အကျွန်ရို့ရွာ၌ လူသိများ လူသိများသူတဦးဖြစ်သည့်အလျှောက် အကျွန့်သူငယ်ချင်းက ချက်ချင်းပင်။
“အဘိုး၊ ဒေလမ်းတည့်တည့်လားပါလီ။ ယှိက ခွဆုံကိုရောက်တေခါ အယှိဘက်ကိုကွေ့ပါ။ လက်ျာဘက်နှစ်ဆောင်ခြာ သုံးဆောင်တက် သံဖြူမိုးလို့အိမ်ပါ။” ဟုသွက်လက်စွာညွှန်လိုက်၏။ ယင်းအခါ ဝါကြီးမာ နားမလည်ဟန်နှင့် မျက်မှောင်ကုတ်လားပြီး။
“ဇာဝေ၊ ယှိကခွဆုံ အယှိဘက်၊ ဇာအယှိဘက်လဲ”
“ဟုတ်ပါရေ အဘိုး၊ ရှိကခွဆုံ အရှိဘက်ကို ကွေ့ပြီးကေ၊ သုံးအိမ်အတက်မာ”
“ဒေသူက ယှိကခွဆုံ အယှိဘက်လို့ပြောနိန်လို့” ဟုပြောကာ ပွဲစား စောသာကျော်၏အိမ်ဘက်သို့ ထွက်လားလီပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 11:28 PM 1 comments
ရခိုင်မင်းများစိုးစံခသော နှစ်ကာလကို ခေတ်အားဖြင့် ပိုင်းခြားလိုက်ပါက အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၄- ပိုင်း ပိုင်းခြား၍ ရနိုင်ပါသည်။ ယင်းရို့မှာ-
(၁) အလွန်ရှေးကျသော (ဒွါရာဝတီ၊ ဝေသာလီ၊ ဓည၀တီ)ခေတ်၊ (၂) ဝေသာလီ ကျောက်လှီကားခေတ်၊ (၃) လေးမြို့ခေတ်နှင့် (၄) မြောက်ဦးခေတ် များ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ ရာဇ၀င်ဆရာရို့က မြောက်ဦးခေတ်ကိုပင် -ပထမမြောက်ဦး၊ ဒုတိယမြောက်ဦး၊ တတိယ မြောက်ဦးဟူ၍ပင် ၃-ပိုင်းပိုင်းခြားကြပါ သိမ့်သည်။ ကျွန်ုပ်ရို့သည် အလွန်ရှေးကျသော ဒွါရာဝတီ၊ ဝေသာလီ၊ ဓည၀တီခေတ်များက ရခိုင်မင်းများအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ကို စာပီကျမ်းဂန် အထောက် အထားများဖြင့် ဂ,နစွာမတင်ပြနိုင်သိမ့်သဖြင့် မှုန်ရေးရေးမျှသာတင်ပြနိုင်သည့် အခြေအနိန်တွင်ဟိသည်။
သို့ရာတွင် ဝေသာလီကျောက်လှေကားခေတ် (အေဒီ ၄-ရာစုအစပိုင်း)မှစ၍ကား အထောက်အထားအတော်အသင့်စုံလင်စွာဖြင့် တင်ပြနိုင်ကြပါဗျာယ်။ ဝေ သာလီခေတ်ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂုပ္ပတဘုရင်များခေတ်နှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်၏။ ဂုပ္ပတခေတ်တွင် အိန္ဒိယ၌ မနုဓမ္မသတ်ကျမ်းကြီး ပေါ်ထွက်နိန်ဗျာယ်ဖြစ်၍ ထိုဓမ္မသတ်ကျမ်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့လည်း မရှေးမနှောင်း ရောက်ဟိလာခကြောင်း အထောက်အထားများတွိ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ စာပီ အရေးအသားများလည်း တတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သည်။
တရားစီရင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အာန္ဒစန္ဒြားကျောက်စာ၊ ဂါထာအပိုဒ် (၅၈)ကို ရခိုင်ဘာသာပြန်ဆိုလျှင်–
“သဘင်ခန်းမဆောင်ကြီး(တရားရုံး)ထဲတွင် နိန့် စဉ်နိန့်တိုင်း စည်းဝေး(ရုံးထိုင်)ခြင်းကိုပြုလုပ်လေ့ဟိ၏။ (မင်းကြီးသည်)သနားခြင်းကရုဏာဟိသဖြင့်၊ အလွန်လျှင် (အမှန်ပင်) သီဒဏ်ပီးထိုက်သောသူရို့ ကိုပင်လျှင်၊ အမြဲအပြစ်မှ ချမ်းသာပီးလေ့ဟိ၏။” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 9:38 AM0comments
သူ့ကျွန်မခံ ဗိုလ်ချင်းပျံ၏ တော်လှန်ရေးခရီး
ဘာသာပြန်ဆိုသူ မောင်ဦးရှင်နှင့် အောင်ကျော်သိန်း
အချိန်ကား ရခိုင်ရို့ ထီးကျိုးစည်ပေါက် နန်းမပျောက်မှီကာလ (၁၇၈၄)ခု မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အချိန်ကဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ ပြည်ထဲရေး အထူးသဖြင့် နန်းတွင်းအရေးအခင်းများသည် မငြိမ်မသက်နှင့် အယှုပ်အထွီး ဖြစ်နိန်သောကာလ ဖြစ်သည်။ ရခိုင် ရာဇပလ္လင်ကို အပိုင်အုပ်စိုးရန် ရခိုင်အမျိုးသားအချင်းချင်း သူတစ်လူ ငါတစ်မျိုးဖြင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းနိန်ကြသည်။ ရခိုင်အမျိုးသားအချင်းချင်းကြားတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမှာ အဖတ်ဆယ်မရအောင် ပြိုကွဲလျှက်ဟိနိန်ပါသည်။ မြောက်ဦးမြို့တော်၏ အမိန့်ကို မနာခံသော မြို့စား နယ်စား များသည် သူတလူ ကိုယ်တမင်း ဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လျှက် ဟိကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တချို့သည် မိမိနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော ဗမာပဒေသရာဇ် သျှင်ဘုရင်ထံ လားရောက်၍ ရခိုင်ပြည်တွင်းအရေးအား ငြိမ်ဝပ်ပီးရန်အတွက် အကူအညီလားရောက် တောင်းဆို ခပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗမာ ပဒေသရာဇ်သျှင်ဘုရင် ဘိုးတောင်မောင်ဝိုင်းသည် သက္ကရာဇ် ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်အား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး နန်းရိပ် ထီးဖြူကို အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခသည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်း ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးမှာ သူ့ကျွန်ဘ၀သို့ လူလုံးမလှ ကျရောက်ခကြရပါသည်။
Posted by ဥဂ္ဂါပျံ at 12:21 AM0comments